यहाँ बन्दैछ विश्वकै ठुलो एयरपोर्ट, वार्षिक १० करोड यात्री, कुन ठाउ होला ? जान्नुहोस (फोटो सहित) -
यहाँ बन्दैछ विश्वकै ठुलो एयरपोर्ट, वार्षिक १० करोड यात्री, कुन ठाउ होला ? जान्नुहोस (फोटो सहित)
यो कुनै अन्तरीक्ष यानको तस्बिर होइन । यो त बन्दै गरेको विश्वकै सबैभन्दा ठुलो एयरपोर्ट हो । चीनको राजधानी बेइजिङमा एउटा विशाल नयाँ एयरपोर्ट बनाइँदैछ । जसलाई विश्वकै सबैभन्दा ठुलो एयरपोर्ट भनिएको छ । यसको परीक्षण सन् २०१९ अक्टोबरबाट हुनेछ । बेइजिङ महागरपालिका कार्यालयका अनुसार यसको इन्जिनियरिङ्ग परियोजना जुलाई २०१९ मा पुरा हुनेछ । यसको परीक्षण तीन महिनापछि अर्थात अक्टोबरबाट सुरु हुँदैछ ।
यो एयरपोर्ट बेइजिङस्थित तियानमेन स्क्वायरबाट ४६ किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित दाक्सिङ्ग जिल्ला र लाङ्गफाङ्गको सीमामा अवस्थित छ । लाङ्गफाङ्ग हिबेई राज्यमा रहेको छ । जिल्ला सरकारका प्रमुख व्याङ्ग युग्योले भनेका छन्, डेक्सिङ्ग जिल्ला विमानस्थल निर्माण र विमानस्थलको आर्थिक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदैछ । ग्लोबल टाइम्सको समाचार अनुसार अन्तरीक्ष यान जस्तै देखिने यो एयरपोर्ट ३,१३,००० वर्ग मिटर जग्गामा फेलिएको छ । यो एयरपोर्टमा ६ वटा कोरिडोर हुनेछन् । यसमा बगैँचा, ल्याडस्क्याप र घरेलु तथा विदेशी यात्रुका लागि अलग-अलग टर्मिनल हुनेछ । एक वर्षमा यो एयरपोर्टबाट १० करोड यात्री यात्रा गर्नेछन् । यो एयरपोर्टबाट हरेक वर्ष ४ मिलियन टन सामान पनि ढुवानी हुनेछ ।
यो एयरपोर्ट अहिले बेइजिङ्ग राजधानी क्यापिटल इन्टरनेशनल एयरपोर्टबाट ६७ किलोमिटर टाढा रहेको छ। शहरलाई एयपोर्टसँग जोड्नका लागि द्रतु राजमार्गको निर्माण पनि सुरु भइसकेको छ । एयपोर्टको नयाँ डिजाइन अनुसार यहाँ चारवटा धावनमार्ग हुनेछन् । हरेक वर्ष यो एयरपोर्टमा ६ लाख २० हजार उडान हुनेछन् ।
Previous सावधान ! छिटो रिसाउने मानिसको मृत्यु पनि छिटो हुने, एक अध्ययन
Next खवरदार ! सरकारी अनि सस्तो भनेर फस्नु होला सिभिल हस्पिटलमा ! असलमा यस्तो छ वास्तविकता